Global Voices teny Malagasy » Eo am-pitendrena i Torkia…. Miresaka sakafo sy ireo mpianatra any Etazonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Mey 2019 3:56 GMT 1	 · Mpanoratra Deborah Ann Dilley Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Herinandro mangingina tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Tiorka, nangina ireo bilaogera sasany ankafiziko tahaka an'i Turkish Torque sy Talk Turkey . Na izany aza, navitrika tsy nisy toy izany kosa i Mavi Boncuk  sy Erkan ao amin'ny Field Diary .
Nahasarika izao tontolo izao ny fitsarana an'i Orhan Pamuk , mpamorona tantara Tiorka noho izy naneho hevitra manohitra ny Repoblikan'i Torkia. Erkan ao amin'ny Field Diary manome antsika fihetseham-po fohy momba ny raharaha Orhan Pamuk , ary manana sary misy ireo polisy misahana ny rotaka tao ivelan'ny efi-pitsarana nanaovana ny fotoam-pitsarana azy .
Mavi Boncuk nandefa andiana rohy misy ireo nahandro navoakan'ny bilaoginy hatramin'ny nanombohan'ny bilaoginy , ary koa manao dokambarotra ny bilaoginy ara-tsakafo manokana, Tastes of Mavi Boncuk .
Misy ny fizarana fandraketam-peo (podcast) vaovao ataon'i Kevin sy Fatma Take On the World , ary ahenoana an'i Fatma tamin'ity indray mitoraka ity! Ny bilaogy Mp3, Unomundo  indray tamin'ity herinandro ity, mifantoka amin'ny mozika hip hop.
Socioeconomics nanana eritreritra tampoka momba ny horonantsary King Kong . Ignore Me If You Can manoratra ny horonantsary hitany vao haingana, mitondra ny lohateny hoe Havoc . Manoratra momba ny varotra amin'ny krismasy sy ny tambaovao any Istanbul ihany koa izy, lohahevitra izay noresahany tao amin'ny Metroblogging:Istanbul ihany koa. Phanja avy ao amin'ny The Need to Know manambara fa haka “fialan-tsasatra fety” izy. 
Yogurtland manana lahatsoratra momba ny fanaovana fanasana sy fisaorana amin'ny mariazy , sy ahandro ho an'ny Strained Yogurt Cake , izay ampiasaiko ho an'ny iray amin'ireo tetikasako farany amin'ity telo volana ity, ary tiako hanomezana ny fisaorako ihany koa!
Zava-baovao ho an'ity herinandro ity ny bilaogy Tiorka amin'ny teny Anglisy, antsoina hoe Ne Var, New York? , kilalaon'ny teny hoe “Ne Var, Ne Yok” (ara-bakiteny hoe, inona no ao, inona no tsy ao) ny lohateny, izay tenin-jatovo tiorka mitovy amin'ny hoe “inona ny vaovao?”.
Hita tamin'ity herinandro ity ihany koa ny bilaogy Queen of Flub , mpianatra Tiorka Amerikana ao amin'ny MIT izy, izay ao anatin'ny dingana farany amin'ny famaranam-pianarana any amin'ny oniversite tahaka ny maro amintsika. Mandika araka ny tokony ho izy ny lahatsoratra Tiorka ho amin'ny teny Anglisy i Mert Ulas , Tiorka mpianatry ny oniversite any Etazonia, na dia sahirana amin'ny fiafaran'ny enim-bolana aza izy, na izany aza, milaza izany rehetra izany ny lahatsorany farany amin'ny teny Tiorka .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/14/138414/
 Erkan ao amin'ny Field Diary: http://frazer.rice.edu/~erkan/blog/
 Nahasarika izao tontolo izao : http://frazer.rice.edu/~erkan/blog/archives/000598.html
 fihetseham-po fohy momba ny raharaha Orhan Pamuk: http://frazer.rice.edu/~erkan/blog/archives/000605.html
 sary misy ireo polisy misahana ny rotaka tao ivelan'ny efi-pitsarana nanaovana ny fotoam-pitsarana azy: http://frazer.rice.edu/~erkan/blog/archives/000609.html
 rohy misy ireo nahandro navoakan'ny bilaoginy hatramin'ny nanombohan'ny bilaoginy: http://maviboncuk.blogspot.com/2005/12/food-steps-from-mavi-boncuk.html
 Kevin sy Fatma Take On the World: http://kevinandfatma.blogspot.com/2005/12/new-podcast.html
 eritreritra tampoka momba ny horonantsary King Kong: http://www.socioeconomics.com/2005/12/random_thoughts_on_king_kong.php
 horonantsary hitany vao haingana, mitondra ny lohateny hoe Havoc: http://www.angelvox.org/weblog/?p=130
 varotra amin'ny krismasy sy ny tambaovao any Istanbul : http://www.angelvox.org/weblog/?p=131
 Metroblogging:Istanbul : http://istanbul.metblogs.com/archives/2005/12/jingle_bells_ji.phtml
 haka “fialan-tsasatra fety” izy.: http://phanja.blogspot.com/2005/12/im-sorry-people-i-havent-been-feeling.html
 fanaovana fanasana sy fisaorana amin'ny mariazy: http://www.yogurtland.com/2005/12/15/invitations-favors-etcdavetiyeler-ufak-hediyeler/
 milaza izany rehetra izany ny lahatsorany farany amin'ny teny Tiorka: http://mertulas.blogspot.com/2005/12/yup-yup.html